Asa Marketing amin'ny Video | Martech Zone
Samy manao ny faminaniany amin'ny faran'ny taona ny tsirairay. Heveriko fa azonao atao ny miala amin'ny hoopla rehetra ary miasa ny paikadim-barotrao amin'ny taona ho avy mifototra amin'ny zava-misy rehetra. Paikady multi-fantsona, automatisation marketing, finday ary horonan-tsary dia hanohy hitarika fidirana sy fifamoivoizana amin'ny orinasanao. Ity misy infographic tsara misy statistika mahafinaritra izay manohana ny filanao fampiharana stratejika ara-barotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2014.
Delos Incorporated mizara ireo Torohevitra Marketing amin'ny Video:
Plan - Ny horonan-tsary dia tokony ho ao anatin'ny drafitry ny varotra ankapobeny, tetikady fampiroboroboana izay manohana ny tanjonao. Tsy ampy ny famokarana horonantsary mahafinaritra - mila ampiasainao izany! Fantaro ny tanjonao - na manentana izy ireo na mitondra fiara - ary mametraka ny refin'ny fahombiazanao.
Voka-pambolena sy fiompiana - Iza ny tsenanao lasibatra ary inona ny teti-bolanao? Vantany vao voavalinao ireo fanontaniana ireo dia mitadiava orinasa mpamokatra horonantsary afaka mamelona ny fahitana anao. Eritrereto ny fanasongadinana ireo mpanjifa afa-po na ireo serivisinao manokana.
Promote - Apetraho ny satroka sosialinao ary manomboka mizara! Aiza no mihantona ny mpanjifanao? Tadiavo izy ireo ary aparitaho ny teny. Mieritrereta Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube…
Tags: Cisconampidirina deloseloquaemarketerFacebookhoronantsary facebookSary torohaympivarotra an-tseraseramarketing sherpaLahatsary Marketinghaino aman-jery mistfiovam-po videofandraisana an-tsaryvideo marketingvideo marketing strategydrafitra horonantsaryhoronantsary prVideo famokaranafampiroboroboana horonantsarypaikadin'ny horonantsaryhoronan-tsaryYouTube
Salesforce: ny taonanao mandeha ho azy amin'ny Review Infographic